गल्कोटमा फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य सुरु ! | ebaglung.com
गल्कोटमा फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य सुरु !
२०७४ श्रावण १६, सोमबार २२:१८	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार 629 पटक हेरिएको !
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७४ साउन १६ । अब हुने प्रदेशसभा र केन्द्रिय संसदको निर्वाचन प्रयोजनका लागि गलकोट नगरपालिकामा सोमवार देखि मतदाता नामावली संकलन कार्य सुरु भएको छ । यसअधिसम्म बागलुङ बजार धाउनुपर्ने समस्या यस बर्षदेखि गलकोट नगरपालिका भएपछि हटेको छ । सदरमुकामस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर नाम लेखाउन कठिन भएको भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि स्थानीय तहसम्मै संकलन गरिने व्यवस्था मिलाईएको हो ।
साउन १ देखि १५ दिनका लागि मतदाता नामावली संकलनको समय छुट्याए पनि गलकोटमा भने आजदेखि संकलन कार्य अगाडि बढाईएको गलकोट नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । गलकोट निर्वाचन कार्यालयले आजदेखि भाद्र १ गतेसम्मका लागी मतदाता नामावली संकलन गर्ने बताएको छ । फोटो सहितको नामावली संकलन गर्नुपर्ने भएकाले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न भने कठिनाइ पर्न सक्ने ठानिएको छ ।
जुनसुकै जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर मेरो ठेगान यो हो अनि मेरो नाम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनु पर्यो भनेर फारम भर्न सकिन्छ । तर प्रदेशसभा वा केन्द्रिय संसद कुनै पनि तहको निर्वाचनको मिति साउन महिनाभित्र घोषणा भएमा, मतदाता नामावली संकलनको काम भने प्रभावित हुने बताइएको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदासम्म नाम दर्ता भएका मतदाताले मात्रै उक्त निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छन्। यसपटकको मतदाता नामावली संकलन प्रभावित नहोस् भनेर उक्त कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका लागि सरकारलाई लेखि पठाइएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् । जसमा निर्वाचन मिति घोषणा भएको १५ दिन सम्म पनि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।
मोटरसाईकल दुर्घटनामा शिक्षक कँडेलको मृत्यु !...
बागलुङ २०७५ असोज ३ । बागलुङ नगरपालिका २ रुद्रेपिपलमा मंगलबार राति मोटरसाईक